ZayYarHlaing: Happy Bday2Me 1!!!
Happy birthday to dear Zay Yar Hlaing ........,
May good lord be with you,
ဌဲ ဌဲ ။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်၇ဲ့birthday ဗျ။ အသက်ကတော့မေးနဲ့ ။ ၁၈နှစ်။ ဌီး ...။
Bday ဆိုတော့နဲနဲသီးခံဗျာ။ ကိုမျိုးကျော့မြိုင် ကိုအားကျပြီး Rap နဲနဲလောက်တော့၇ွတ်လိုက်အုံးမယ်။
ကျွန်တော်နာမည်ဇေယျာလှိုင်ပါ ၊စမ်းချောင်းမြို့ မှာနေပါတယ်။
ကျွန်တော်အမေဒေါ်ကြူကြူနွယ် ၊ Accounting Officer လုပ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်ချစ်သူယုမီဟာ ၊English teacher ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်အသက် ၃၀ ကျော်တာ တော်တော်ကြာပြီထင်ပါတယ်။ (ခုထိပေါတုံးပါ)
နတ်လူအများသာဓုခေါ်စေသော် ... ဒူ ...ဝေ ဝေ ဝေ။
မသိသေးသူလဲ၇ှိမယ်။ ပြောပြီးပြီနော် ကျွန်တော် Bday မို့ နဲနဲတော့သီးခံကြပါလို့ ။
မွေးနေ့ ပွဲများကျင်းပသောအခါ မွေးနေ့ ကိတ်ပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်းသောဓလေ့မှာ မြန်မာတို့ ၏
အလေ့အထမဟုတ်ပါ။သိပ္ပံအမြင် သိပ္ပံသဘောတရားတို့နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းလည်းမရှိပါ။
When celebrating birthday parties, people usually light candles on the birthday cake. This is notaMyanmar custom. It doesn't necessarily concern with any scientific nature too.
English people have accepted that this is the sign of honoring the birthday boy or birthday girl. They also believe that the light of the candles brings good luck to the person whose birthday is celebrating.
မွေးနေ့ကိတ်ပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်းသော ဓလေ့ကို ရှေးခေတ်ဂရိလူမျိုးတို့က စတင်ခဲ့သည်ဟု လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ ဂရိတို့ ကိုးကွယ်သော ဇုနတ်မင်းကြီးနှင့် ၄င်း၏ကြင်ယာတော် လီတို တို့တွင် အမြွှာညီအစ်မနှစ်ဦးရှိလေသည်။ တစ်ဦးမှာ အပိုလို နတ်သမီး ဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဦးမှာ အာတီးမစ်နတ်သမီး ဖြစ်လေသည်။ အပိုလိုနတ်သမီးသည် လကိုစောင့်ရှောက်သော တာဝန်ကို ယူရပြီး အာတီးမစ် နတ်သမီးသည် အမဲလိုက်သူများနှင့် ကလေးသူငယ်များကို စောင့်ရှောက်သည်ဟု ယုံကြည်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် အာတီးမစ် နတ်သမီး၏ရုပ်ပုံတွင် လေးနှင့်မြားကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲလေ့ရှိပါသည်။
It is believed that the custom of lighting candles on birthday cakes has descended from Greek culture. Zeus and his wife, Leto, have twin daughters. One is Apollo and the other is Artemis. It is believed Apollo is the goddess of moon and Artemis takes care of the hunters and children. Thus artists include bow and arrow in Artemis' portrait.
အဆိုပါ အာတီးမစ်နတ်သမီးကို ကိုးကွယ်သူများသည် လစဉ် လဆန်း ၆ ရက်နေ့တိုင်းတွင် သူမအတွက် ပြုလုပ်ထားသော နတ်ကွန်း၌ ကိတ်မုန့်များကို သွားရောက်လှူကာ ပူဇော်လေ့ရှိကြပါသည်။ ကိတ်မုန့်များကို အ၀ိုင်းပုံပြုလုပ်ထားကြပြီး ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင်သေးသေးလေးများကို ထွန်းညှိပူဇော်ခဲ့ကြပါသည်။
People who worship Artemis put cakes at the shrine of Artemis. The made round cakes and also lit small candles on those cakes.
အဆိုပါအလေ့အထသည် အလယ်ခေတ်တိုင်အောင် ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပြီး ထိုခေတ်က ဂျာမန်လယ်သမားကြီးများသည် မွေးနေ့ကိတ်များတွင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်းညှိကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။ သူတို့သည် မွေးနေ့ရှင် ကလေးငယ်မနိုးခင် မွေးနေ့ကိတ်ပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင် ထွန်းညှိထားကြပါသည်။ ဖယောင်းတိုင်ကိုလည်း ကလေး၏ လက်ရှိအသက်ထက် တစ်နှစ်ပေါင်းပြီး ထွန်းပေးထားရပါသည်။ ဥပမာ ကလေးအသက် ၆ နှစ်ဖြစ်ပါက ဖယောင်းတိုင် ၇ တိုင် ထွန်းထားပေးရပါသည်။ ၄င်းဖယောင်းတိုင်များကို အခြားအစားအသောက်များ စားသုံးပြီးမှ နောက်ဆုံးကြမှ မီးမှုတ်ရပါသည်။
That custom spread until Middle Age. During Middle Age, German farmers also put candles on birthday cakes. They lit candles on birthday cake before the birthday boy or girl woke up. The number of the candles is always 1 number larger than the kid's age. For example, if the kid is6years, they put7candles on the cake. They blew out the candles only after they had finished eating other food.
ဖယောင်းတိုင်မီးမှုတ်ရာတွင်လည်း တစ်ကြိမ်တည်းနှင့် ဖယောင်းတိုင်အားလုံးငြိမ်းအောင် မီးမှုတ်နိုင်မှသာ ဆုတောင်းပြည့်သည်ဟု ယုံကြည်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် မိမိလိုချင်သောဆုတောင်းကို အသံထွက်တောင်းလိုက်လျှင် ဆုတောင်းမပြည့်ဖြစ်တတ်သည်ဟုလည်း ယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဂျာမန်တို့၏ အဆိုပါမွေးနေ့ကိတ်အလေ့အထသည် တဖြည်းဖြည်းပျံ့နှံ့လာပြီး မွေးနေ့များတွင် မွေးနေ့ကိတ်နှင့် ဖယောင်းတိုင်သည် ခေတ်စားလာခဲ့ပါသည်။
The candles should be blown out in one time so that the wishes can be fulfilled. It is also believed that if the wish is said out loud, the wish will not be fulfilled. Later in German too this custom spread.
This is the picture of Artemis.
ဌဲ ဌဲ။ကဲအားလုံပဲကျေးဇူးဗျာ။ သီးခံပြီး အဆုံးထိဖတ်ပေးကြတဲ့အတွက်ပါ။
Posted in Happy Bday by Zay Yar Haling
0 comments: to “ Happy Bday2Me 1!!! ”